Ziziphi iindlela zokuSebenza kweeNjini zokuSebenza ngokufanelekileyo Ukuba Ndifanele Ndizithabathe?
Ukuphuculwa kweenjini zokucwangcisa ngokufanelekileyo (okanye i-SEO) kufuna ulwazi oluyisiseko lwemihla yokulungisa i-algorithm i-Google ihamba nayo rhoqo. Ummeli ngamnye we-SEO kufuneka abe nekhono lokuhlukanisa ukuba yeyiphi na isicwangciso esili-10 esele siphumelele ukuze sifinyelele injongo ekugqibeleni ekupheleni kwephulo le-SEO.Olu lwazi luya kunceda ukuba ube ngcono xa unquma ukuba yeyiphi na amanyathelo okufanele uyenze kwi-SEO efanelekileyo.
Kwinqaku lemihla, iingcali ze-Semalt ziza kukuxelela malunga nezicwangciso zokusebenza zokusebenza ngokucwangcisa injini ezisebenzayo ngo-2017 - kansas city wordpress developer. Funda ukuze uwazi bonke. Ngoko, makhe siqale.
Iimpawu ezintathu ze-SEO ezisebenzayo Ongayisebenzisa ngoku ngoku
1. Gxila kwi-Latent Semantic Indexing
I-Latent Semantic Indexing, eyaziwa nangokuthi yi-LSI, yindlela eyaziwayo ye-SEO ngokuphathelele ukuchonga ubudlelwane phakathi kweengcamango kunye nemigqomo kwimixholo. Inceda i-Google kunye nezinye iinjini zokukhangela ukucacisa ezininzi iingcaciso zamagama kunye nemibinzana ethile.
Ngokulula nje, i-LSI ibheka iilwimi ezihambelana namazwi angundoqo kwiphepha lewebhu.
Nangona i-LSI isetyenziswe ngaphezu kweminyaka engamashumi amabini edlulileyo, lo mkhuba usuzuzisa kwi-SEO yanamhlanje. I-keywords ye-LSI ilungile ekuphuculeni udidi lweGoogle lwamaphepha akho ewebhu. Okubaluleke ngakumbi, banyusekisa ukuba inqanaba lakho lovimba luza kuhlala ixesha elide kwi-SERP kunye nokukhusela isayithi lakho kwisigwebo.
2. Iimpawu eziphambili kwiiNtloko
Le nanjalo inenzuzo kakhulu kwiziphumo ze-SEO ezingcono, nangona okokuqala kwaziswa ekupheleni kweminyaka engama-90. Uninzi lweengcali ze-SEO zibonisa ukubandakanya esi sicwangciso kwimisebenzi yakho yemihla ye-SEO ukususela ngeenjini zokukhangela kulindeleke ukuba izihloko zibandakanye izikhokelo kwizihloko eziphambili zephepha.
Kweminyaka, iigxina ezithethiweyo kuphela ze-SEO zi-H1 ne-H2. Izinto zitshintshile ngokuhamba kwesikhathi. Kule mihla, kukho iintloko ezi-6, ezivela kwi-H1 ukuya kwi-H6-nganye ichaza ukubaluleka kokubaluleka. I-H1 yenye yeyona nto ibaluleke kakhulu, kufuneka isetyenziswe kuphela kanye ngephepha ngalinye, ngokuqhelekileyo kwisihloko sesithuba. Isiqendu ngasinye esilandelayo sifanele sisetyenziswe njengecandelo elingaphantsi.
3. Cinga ukuxhuma kwiZiko leGunya
Akunakukhanyela: izixhumanisi eziphumayo ziphucula indawo yakho yewebhu kunye negunya ukuba lisetyenziswe ngokuchanekileyo. Ngamazwi alula, iziqhagamshelwano eziphumayo zizo ziqhagamshelwano ezikhomba kwenye indawo kwisiza kuwebhusayithi yakho. Ukuqhagamshela kwizikhulu zamagunya kunceda iGoogle ukuba iqonde i-niche yakho kunye nokwandisa umgangatho wewebsite yakho, edlala indima ephambili kwi-SEO yakho yesayithi.
Ukuqhagamshela kwizikhulu zamagunya ngenye yezindlela ezilungileyo zokuba udibaniselwano kunye namashishini asekhompyutheni anesigxina esifanayo.
Ukwenza i-SEO yakho isebenze kangangoko kunzima njengoko kubonakala ngathi. Ukuhambelana neziphakamiso ezikhankanywe ngasentla kuya kukunceda udale isicwangciso se-SEO esilungileyo kunokuba usebenza ngoku.
Ukuba unemibuzo okanye ufuna ukwabelana ngeendlela zakho ze-SEO eziphumelelayo nathi, ungabi namahloni okuqhagamshelana neqela lethu leSemalt. Sithanda ukuva kubafundi bethu!